Golaha Wasiirrada Xilgaarsiinta Oo Ansixiyey Miisaaniyadda Sanadka 2022
October 31, 2021 F.G 0
Kulan ay maanta yeesheen Golaha Wasiirada uuna shir guddoomiyay R/Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu anisixyay miisaaniyadda dowladda 2022. Miisaaniyada goluhu uu ansixiyay ayaa gaareysa 69.I Mallion oo dollar taaso oo ka kooban Mushaarka Shaqaalaha, Caafimaadka iyo mashaariicda horumarinta. Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa bogaadiyey kororka iyo ansixinta miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022-ka isagoo ku bogaadiyey Wasaaradda Maaliyadda oo miisaaniyadda 2022-ka ku soo dhammays tirtay waqtigii loo muddeeyey, dhammaan hey’adaha dowladda ee ka shaqeeyay kordhinta dakhliga dowladda iyo Golaha Wasiirrada oo ansixiyay. Si kastaba Ha ahaatee Xuukuumada Rooble Iyo Madaxweeyne Farmaajo ayaa ah Kuwa aan u muuqan in ay waqtigaan Qabtaan Doorasho waxaana ay waqtiga ku dhameeynayaan magacaabis iyo xilka qaadis.
Agaasime Max’ed Aadan Koofi Oo xil ka qaadista lagu sameeyey
Agaasimaha Hay’adda socdaalka iyo Jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi ayaa soo dhoweeyey xilka ka qaadista lagu sameeyey, isagoo hambalyo u diray agaasimaha cusub ee lagu bedelay. Golaha Wasiiradda xukumada Somalia oo kulan aan caadi aheyn ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa xilkii ka qaaday Agaasimihii Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha. “Xilalka iyo Shaqada Dowladda oo meerto ah awgeed, waxaan soo dhoweynayaa xil ka qaadistayda iyo magacaabista Agaasimaha Guud ee HSJ Mudane Cabdulkadir Cilmi, waxaana ugu duceynayaa in uu Allah ku garab galo masuuliyadda culus ee loo igmadey” ayuu yiri Koofi oo qoraal kooban ku baahiyey baraha bulshada. Mr Koofi ayaa intaas ku daray in masuulka cusub ee loo magacaabay Hay’adda socdaalka iyo Jinsiyadda uu yahay qof dhalinyaro ah oo halkeeda ka sii wadi kara shaqada heyadda. “Mahad iyo bogaadin waxaa u soo jeedinayaa madaxda Qaranka oo hay’adda u soo xuley nin dhalin yaro ah oo aan aaminsanahey in uu halkii ka sii wadi doono howlaha hay’adda. Dowladnimada ayaa naga badan” ayuu hadalkiisa ku soo xiray. Maxamed Aadan Koofi ayaa xilka agaasimaha guud ee hay’adda socdaalka iyo Jinsiyadda loo [Sii aqri]
Prof Yahay Caamir Oo Codsi Muhiim ah u Soo Jeediyay Wasarada Batroolka Somaliya
October 29, 2021 M.Jo 0
Codsi: ku socdo wasaaradda Batrolka iyo Macdanta. Codsiga 1aad. Bisha November 2021 ,waxaa la qorsheeyay in Dubai- UAE, uu ka dhacayo Shirkii Shidaaleyda Africa. Annagaa waa nalagu Casuumay, ma xumo in laga qeyb galo. Liikin ha la iska ilaaliyo Saxiix, dhib u keeni karo Mustaqbalka Caruur Somaliyeed oo aan weli dhalan. wey ogyihiin Shirkaduhu in Hadda Somalia uuna ka jirin Baarlamaan Heshiisyada Ansixiyo, Madaxweyne Rasmi ah iyo in Dowladu ey tahay Xil gaarsiin, aan gali karin Heshiisyada qaar. waxa ey noo arkaan Dooli yar oo shabaq ku jiro. Yaan Bisad nalooga dhigin Shimbirta Daawuuska, oo aan nala indha sarcaadin, Fiiri danta Dadka iyo Dalka ( F.S: 1aad) Codsiga 2aad. inta aan ogahay, Aduunka kama dhicin, Shirkad Shidaal baarto oo kharajkii Baaritaanka loogu Bedelay Offshore Blocks Shidaal ku jiro. waxa ey sheeganayaan in $ 64 Million ey ku bixday baaritaanka. ( F.S:2aad) Haddii aad Fiiriso Natiijada baaritaankooda, waa isla tii hore ee 1980kii ey u soo saartay Shirkadii “Western Geco”, oo wax yar lagu qurxiyay, kharajkii markaa ku baxayna waxa uu ahaa $2 Million kaliya, waxaa [Sii aqri]
Shirka Golaha Wasiirada Galmudug Oo Lagu Qabtay Magaalada Guriceel
October 29, 2021 F.G 0
Waxaa Magaalada guriceel Xalay lagu qabtay shirka golaha wasiirada dowlad gobaleedka galmudug, kaas oo uu shir guddoominayay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi kaariye Qoor-Qoor. Shirka ayaa looga hadlay Ajendayaal ay ka midyihiin Amniga galmudug, gurmadka dadkii ku barakacay dagaalka guriceel iyo Maqaamka magaalada. Shirka ayaa intuu uu socday waxaa warbixin looga dhageystay guddiga gurmadka guriceel intii ay dagaalada ka socdeen magaalada. Ugu dambeyn golaha wasiirada dowlad gobaleedka Galmudug ayaa cod gacan taag ah ku ansixiyay in magaalada Guriceel ay noqoto degmo.
MaxuuSalka Ku Haysaa Xiisadda U Dhexeeysa Dowladdaha France Iyo Britain?
Dacwad oogayaasha France ayaa Jimcaha maanta ah amar ku bixiyay in maxkamad la soo taago kabtanka markab kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Britain kaasi loo haysto in uu soo galay biyaha Faransiiska ruqsad la’aan, waxayna taasi sare u sii qaadaysa muranka xuquuqda kalluumaysiga oo keeni kara loollan ama dagaal dhanka ganacsiga ah. Maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay Arbacadii, iyagoo sheegay in aaladda lagula socdo maraakiibta ay ku ogaadeen in uu ka aruriyay in ka badan laba tan oo kalluun ah biyaha Faransiiska iyada oo aanu haysan shati ama ruqsad. Waxa uu wajahayaa eedeymo ah “ ka kalluumeysiga aan fasaxa loo haysan ee biyaha Faransiiska ee doon ka timid meel ka baxsan Midowga Yurub,” ayuu hadalkiisa raaciyay, waxaana qabanaya ganaax ugu badnaan 75,000 euros ($ 87,000) iyo sidoo kale “ciqaabo maamul.” Milkiilaha doonta ayaa Jimcaha maanta ah ku celiyay in uu aaminsan yahay in doontu ay haysatay ruqsad sax ah oo ay kaga kalluumeysan karo biyaha Faransiiska. Britain ayaa Jimcaha maanta ah u yeertay safiirka Faransiiska u fadhiya London si ay ugu sharraxdo “halisaha,” [Sii aqri]
Madaxweyne Qoor-qoor Oo Digniin Culus u diray kooxda hubeysan ee Ahlusunna
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa fariin adag oo digniin ah u diray kooxda hubeysan ee Ahlusunna. Madaxweyne Qoorqoor ayaa sheegay inuusan wa gogortan ah la geli doonin koox hubeysan oo qowleysato ah taas bedelkeedna uu la dagaalami doono maamulkisa Waxaa uu ugu baaqay culimada Ahlusunna ee hadda ku sugan degaanka Bohol inay hubka dhigaan oo ay dhinac ka raacaan dadkooda, kaalintoodana ka qaataan xoojinta iyo horumarinta Maamulka iyo degaanada Galumdug. “Ma jirto cid aan ka ogolaaneyno inay hub sharci daro ah ay ku heysato tuulo ka mid ah Galmudug, iskaba daaye inay degmo soo weerarto ama qabsato, cidii tabasho qabta waxaa u furan iney si nabad ah u soo bandhgto” ayuu yiri Qoor-qoor. Madaxwaynaha ayaa sidoo kale sheegay Howlgalkii laga sameeyey Guriceel ay aheyd mid degaanka oo dhan looga badbaadiyay iskuday jabhado hubeysan ku doonayeen inay xukunka ku qabsadaan. Qoorqoor ayaa hadalkan ka jeediyey kulan uu xalay degmada Guriceel kula qaatay waxgaradka iyo qeybaha bulshada ee degmadaas.
Beesha Caalamka Oo Maanta War Kasoo Saartay Doorashooyinkii Ka Dhacay Puntland
Beesha Caalamka ayaa War kasoo saartay doorashadii Golayaasha degaanka ee maalmo kahor ka dhacday degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufeyn ee dowlad Goboleedka Puntland, doorashooyinkaas oo ahaa kuwo qof iyo Cod ah. War-saxaafadeed kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa waxaa Maamulka iyo shacabka Puntland loogu hambalyeeyay doorashooyinka Golayaasha deegaanada ee dhacay, iyagoona soo dhaweeyay xamaasadda ay muujiyeen shacabka ku dhaqan degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufeyn. Beesha Caalamka ayaa Puntland ka rajeeysay dhamaystirka diiwaangelinta codbixiyayaasha dheeraadka ah iyo soo saarista doorashooyinka dawladaha hoose ee guud ahaan dawlad Goboleedka Puntland sanada soo socda ee 2022. “La-hawlgalayaashu waxay ku ammaanayaan dhammaan dhinacyada ay khusayso doorkooda geeddi-socodka, iyagoo si gaar ah u xusay wada-shaqeynta wax-ku-oolka ah ee ka dhaxaysa Guddiga Ku-meel-gaarka ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC), ururrada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ah” ayaa lagu yiri Qoraalka Beesha Caalamka. Saaxiibada Beesha Caalamka ayaa waxaa ay hoosta ka xariiqeen sida ay uga go’an tahay inay taageeraan doorashooyinka marka ay ka dhacayaan heer deegaan, heer gobol iyo heer qaran oo dalka Soomaaliya oo dhan ah. War-saxaafadeedka kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa waxaa si [Sii aqri]
Guddiga hirgelinta doorashooyinka Gobolada Waqooyi ee Somaliland ayaa soo saaray Jadwalka doorashada laba kursi oo kamid ah kuraasta Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ee Somaliland. Guddiga oo Qoraal soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in Maanta oo Jimco ah ay bilaabaneyso diiwaan-gelinta Musharaxiinta u tartameysa kuraasta Golaha Shacabka ee tirsagoodu yahay HOP239 iyo HOP237. Labada Kursi mid kamid ah ayaa waxaa ku fadhiyay Xuseen Carab Ciise, kaasoo ah kursiga tirsigiisu yahay HOP239, waxaana u tartamaya Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda xilgaarsiinta Mahdi Maxamed Guuleed Khadar. Sidoo kale kursiga kale ee Tirsigiisu yahay HOP237 ayaa waxaa horey ugu fadhiyay Biixi Iimaan Cige, waxaana Guddiga doorashada Somaliland ay sheegeen in diiwaan-gelinta Musharaxiinta laba kursi lasoo gaba-gabeyn doono maalinta sabtida. Maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho ay ka dhacdo doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi, iyagoona Guddiga doorashada tilmaamay inay wadaan diyaar garoow. Hoos ka Akhriso Jadwalka lasoo saaray
Xaalada uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow oo walaac badan laga muujiyey
October 28, 2021 F.G 0
Guddoomiyaha xisbi la magac baxay Amniga iyo Cadaaladda oo fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed uu ku muujinayo walaac xooggan oo ay ka qabaan badqabka Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur. Roobow oo horey u ahaa ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii December sannadkii 2018-ka ay dawladda Soomaaliya ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Qoraal ka soo baxay xisbiga oo looga hadlay xaalada Mukhtaar Roobow ayaa sidan u qornaa:
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa goordhaweyd gaaray Degmada Gurceel ee Gobolka Galgaduud, halkaasi oo si weyn loogu soodhaweyay. Madaxweynaha ayaa waxaa Guriceel kusoo dhaweeyay Mas’uuliyiin ka tirsan Dowlad Goboleedka Galmudug, oo ay ku jiraan Saraakiil, Maamulka Magaalada iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la filayaa in uu kulamo la qaato saraakiisha amnig Gobolka iyo bulshada ku dhaqan Guriceel. Magaalada Guriceel ayaa soo martay afar maalmood oo uu ka socday dagaal dhiig badani ku daatay, kaasi oo bur-bur iyo barakac xooggan ka dhaliyay, kadib markii ay si weyn ugu dagaalameen Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Galmudug oo dhinac ah iyo Ahlu-Sunna.